“Jechaan osoo hintaane gochaan jijjiirama fidna!”
“Jechaan osoo hintaane gochaan jijjiirama fidna!” Featured
Jiraattonni hojiirra oolmaa sanadichaatiif kutattummaan akka socho'aniidha kan eeran
Amajjii 24 bara 2009 waaree dura Galmi Bulchiinsa Magaalaa Shaashamannee jiraattota, qaamolee oggansaa gara garaafi bakka buutota amantiilee sanada sosochii ummataa bara 2009 magaalattiirratti mariyachuuf walitti qabamaniin guutamee ture.
Galma guddaafi miidhagaa bulchiinsa magaalattii kana keessatti dhaadannooleen, "Jechaan osoo hintaane gochaan jijjiirama ni fidna!, Abbaan furmaata rakkoo magaalaa keenyaa numa!, Gabaasa sobaa hambisuun haaromsa magaalaa keenyaa ni mirkaneessina!" jedhaniifi kanneen biroon maxxanfamaniiru.
Sanadiin ergaawwan dhaadannoo kanneen of keessaa qabuufi sosochii ummataa bara 2009 irratti xiyyeeffate Waajjira Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Bulchiinsa Magaalaa Shaashamanneetiin qophaa'ee kan dhiyaate yoo ta'u, jiraattonnis eddii sanadicharratti baal'inaan mariyatanii booda raggaasisaniiru. Nutis qabiyyee sanadichaa bal'aa keessaa cuunfinee haala ittaanuun dubbistoota keenyaaf dhiyeessineerra.
Sanadachi duudhalee nagaan waliin jiraachuu hawaasa ahaalatti dagaagsuufi tokkummaa ummataa cimsuun danda'amurratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, hirmaannaafi qooda fudhannaa ummanni misooma keessatti qabu dachaan dabaluuf anniisaa guddaa akka ta'uudha kan eerame.
Karoorri sosochii ummataa kun Karoora Guddinaafi Tiraanisformeeshinii marsaa lammaffaa biyyattiin baafatte, imala hiyyummaa mo’achuu, nageenya, heeraafi duudhaalee waliin jireenya hawaasaa irratti ummanni hubannoo argatee haaromsa magaalattii milkeessuu akka ta'es himameera.
Haaluma kanaan hojiilee guguddoo baroota darban Shaashamanneetti raawwataman akka ka’umsa ijootti qabachuun haaromsa magaalattii ittifufsiisuuf hojiin hubannoo ummataa gama hundaan cimsuu barbachisaa ta'uunisaa hubatameera.
Baroota darbanitti riiformiidhaan walqabatee gama kominikeeshiiniitiin odeeffannoo wayitawaafi qulqulluu ummata biraan gahuun ummanni guddina, misooma, nageenyaafi ijaarsa sirna dimokraasii keessatti akka hirmaatu gochuun bu’aaleen jajjabeessoon yoo galma'anillee gama biyya badhaate, jireenyaaf mijattuufi dimokraasiin ittidagaage uumuurratti hojiilee baay’een akka hafaniidha sanadichi kan eere.
Hojii kominikeeshiniifi miidiyaa dhaabbileefi damee hawaasa hunda keessatti hojjachuun ummanni magaalattii marti yaada, gaaffii, sodaafi mamii qabuuf waltajjii marii uumuun rakkoo kamiifuu ummatichi abbaa furmaataa akka ta’uu gochuun barbaachisaa ta'uuni eerameera.
Dhaabbileefi waajjiraalee mootummaa keessatti miira tajajiltummaa ummataa cimsuufi sosochii uumuun hojii kominikeeshiniifi miidiyaa bal’inaan hojjachuun barbaachisaa ta'uun amanameera.
Dhaabbilee amantii keessatti duudhaa waliin jireenya amantiilee, sabootaafi sablammootaa kabajuufi kabachiisuuf sosochii ummataa uumuuf hojii kominikeeshiniifi miidiyaa bal’inaan raawwachuun murteessaaadha.
Dhaabbilee barnootaa keessatti dhaloota biyyaaf yaadu, biyya ofii jaalatu, duudhaa waliin jireenya amantiilee, sabootaafi sablammootaa kabajuufi kabachiisu, lammii amalaafi naamusa gaarii qabu, amanamaa beekumsa argateen biyyaaf hojjachuuf of qopheessu, sassaabdummaa kiraa jibbufi mariitti amanu uumuuf hojii bal'aan gama kominikeeshiiniifi miidiyaatiin raawwatamuu qaba.
Ijaarsa gandaa gadii keessatti, duudhaa waliin jireenya sabootaafi sablammootaa kabajuufi kabachiisuu, nageenya eeggatu, nama amalaafi naamusa gaarii hinqabne sirreessu, misooma naannoosaa keessatti qooda fudhatu, sassabdummaa kiraa jibbu, mariitti amanu, rakkoo naannawasaa kamuu keessatti abbaa furmaataa ta’ee socho’u uumuurratti xiyyeeffannaan hojjetamuu akka qabuudha sandachi kan eere.
Rakkoo kamuu keessatti ummanni abbaa furmaataa ta’ee akka socho’u gochuun sochii misoomaa, nageenyaa, ijaarsa sirna dimokraasiifi bulchiinsa gaarii sirreessuu keessatti hirmaannaafi qooda fudhannaansaa dachaan akka dabalu gochuun barbaachisaa ta'uus eera.
Akka sanadichaatti, ilaalchoota gufachiisoo amantii dawoo godhatanii socho’an dhadhabsiisuu, duudhaalee waliin jireenyaa amantiilee dagaagsuuf, manneen amantii keessattis hojiin kominikeeshiniifi miidiyaa hojjetamuu qaba.
Magaalattiin misoomaafi nageenya ittifufiinsa qabu galmeessuun, fayyadamummaa ummataa mirkaneessuu cinaatti hojii misoomaa hirmaannaa ummataatiin sadarkaa naannoofi biyyaatti fakkeenya gaarii ta’uu dandeesseerti. Yeroo ammaas muuxannoo kana qindeessuun hojii kana sadarkaa olaanaatti ceesisuun nidanda’ama jedha sanadichi.
Ummanni magaalaa shaashaamannee baroottan kana keessa humna, beekumsaafi maallaqasaa walitti qindeessuun hojiiwwan misooma gara garaa keessatti qooda fudhachuun ummata fakeenyummaa gaarii qabu ta'uunis eerameera.
Ummata odeeffannoo wayitaawaa yeroofi saffisa barbaadamuun argatee, hirmaannaa beekumsa irratti hundaa’een, hiyyummaa hadheeffatee jibbu, aadaa hojii gabbifatee guddina misoomaa, nageenya amansiisaa, ijaarsa sirna dimokraasiifi bulchiinsa gaarii mirkaneessuu keessatti qoodnisaa dabale akkasumas maqaa naannichaa roga gaariin ijaaruu keessatti tumsu horachuu.
Maqaa gaarii magaalaa shaashamannee roga gaariirratti ijaaruu, raayyaa kominikeesiniifi miidiyaa bifa haaraadhaan ijaaruufi cimsuu.Rakkoo ilaalcha gufachiisoo amantaa dawoo godhachuun socho’an dadhabsiisuuf hojii miidiyaafi kominikeeshinii manneen amantaa keessatti hojjachuudha jedha sanadichi.
Akkasumas manneen barnoota keessatti ilaalchota gufachiisoo nageenyaafi barnoota dadhabsiisuun lammii naamusa gaarii gonfatee biyyaaf yaadu akka uumamu hojii kominikeeshiniifi miidiyaa bal’inaan hojjachuu.
Dhaabbileefi manneen hojii mootummaa keessatti miira tajaajilummaa ummataa uumuuf rakkoolee ilaalchaafi gocha sassabdummaa kiraa dadhabsiisuu riformii lafa qabsiisuu hojii kominikeeshiniifi miidiyaa bal’inaan hojjachuun ittiquufiinsa hawaasaa mirkaneessuunis akka kallattiitti qabameera.
Ijaarsa gandaa gadii keessatti duudhaalee waliin jireenya ummataa cimsuun ilaalchaafi gocha sassaabdummaa kiraa dadhabsiisuun ilaalcha misoomawaafi dimokraatawaa dagaagsuun hojiiwwan misoomaa hundarratti ummanni akka hirmaatu gochuun duudhaalee hirmaannaa ummata Magaalaa Shaashamannee iddootti deebisuufi ni hojjetama.
Qaamoleen misoomaa qoochoo sadan (dameelee mootummaa, dhaabaafi ummataa) karaa guutuu ta’een akka socho’an gochuun hojii hunda raayyaafi raayyaa qofaan raawwachuu akka ta’e waan hubatameef sochicha bu’aa qabeessa taasisuuf dhimmoonni ittaanan xiyyeeffannaa cimaa argatu.
Isaanis, ijaarama tokko-shanee, gumii addadurootaa, raayyaa jijjiiramaa, kominikeetaroota manneen hojii kilaastaraan ijaaruu, fooramii miidiyaa hundeessuu, kominikeetaroota gandaafi ijaarsa gandaa gadii odeeffannoo ummataa kennuurratti ilaalchaan akka raayyoman gochaan akka raawwatamu tasisuudha.
Raayyaa kominikeeshinii ilaalcha qulqulluu, kutannoo, kaka'umsaafi dandeettii qabaatee dhimmoota murteessoo biyyaa, naannoofi magaalaarratti ilaalcha biyyaalessaa uumu, ilaalchota gufachiisoo dadhabsiisuufi maqaa gaarii biyyaa, naannoofi magaalattii roga gaariin ijaaruu akka hojii ijootti qabamuusaa sanadicharratti eerameera.
Qabiyyee sanadichaa hafeefi yaada ummataa maxxansa keenya biraarratti isin dubbisiisna.
Torban kana/This_Week 7895
Guyyaa mara/All_Days 1292406